सुनिल सेट्टीलाई अफर यो फ्लिममा उनी राजी भए त? | Khabar Sadan खबर सदन
Home ज्ञानज्ञुनकाहरू कुरा सुनिल सेट्टीलाई अफर यो फ्लिममा उनी राजी भए त?
पहिलेको चलचित्र ‘लप्पन छप्पन र लप्पन छप्पन २’का निर्देशक मुकुन्द भट्टले निर्देशन गर्न लागेको तेश्रो चलचित्र ‘एक्स ९’का लागि बलिउड नायक सुनिल सेट्टीलाई अफर गरिएको छ । निर्देशक भट्टले दिएको जानकारी अनुसार, सुनिलसँग एक साताको समय मागिएको छ ।
Previous articleपाथिभरा माताको दर्शन गरौ र आफ्नो भाग्य कस्तो छ हेरौ, आज – ४ अषाढ २०७८ शुक्रवार हेर्नुस् रशिफल
Next articleप्रतिबन्धले दुधको बिक्री बन्द भयो, किन भयो हेर्नुस अब कसरी पेट पाल्ने